बिजय भक्त श्रेष्ठ रणे पनौति नगरपालिका ८ नौविशे
जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रः साथ र सहयोग अपेक्षित ।
राज्यले निश्चित उमेर पार गरेको अवस्थाका नागरिकलाइ जेष्ठ नागरिकको दर्जा दिइ सोहि बमोजिमको सामाजिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निति बनाउछ । निति बन्नु र नियती भोग्नु अलग अलग बिषय हुन् । जिवन र जगत् का बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौ । जानेका र भोगेका छौ । मानविय कर्म र धर्मका बारेमा पनि हामी सचेत छौ । हामीले आआफ्नो जिम्मेवारी बोध गरि दायित्व निर्वाहमा इमान्दारिता पस्कन सके सुन्दर शान्त र बिशाल हाम्रो घर परिवार समाज मुलुक र जगत् नै लाग्न सक्छ ।
एउटा प्रयास जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको नाममा थाल्या छौ । सुवर्ण श्रेष्ठको पहलमा थालिएको जीउँदा देवगणहरुको ससम्मान जिवन गुजारा गर्न सहजीकरण गर्ने अभियान हो यो । शनिवारका दिन भेला भएर बातचित गर्ने रमाइलो गर्ने व्यक्तीगत सरसफाइ गर्ने लगायत आगामी निती तथा कार्यक्रमहरु बनाउने सम्वन्धमा छलफल गरि चियापान गरेर बिदावारी हुदै आएकोमा हाल कोविड ले नो भीड भनेकाले शनिवार शनिवार जस्तो भइरहेको छैन अचेल । तथापी विगतका कार्यक्रमहरुको समिक्षा र आगामी योजना तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा चिन्तन मनन गरेर अहिलेको समयको सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
भए गरेका केहि स्मरणीय पलहरु
१ तिर्थ दर्शन माघमहात्म्यको परिवेशमा शालिनदी र डोलेश्वर यात्रा ।
२ शुभकामना बनभोज ७७ को बिदाइ र ७८ को स्वागत ।
३ सदस्यता शुल्क स्वरुप दुइसय रुपैया सँकलन ।
४ फोटो खिच्ने कार्य ।
५ नियमित शनिवारको भेटघाट र
६ भेटघाटमा दाह्रीजुँगा मर्मत ।
७ नाचगान र चियापान ।
८ सत्यनारायण श्रेष्ठ र निकाश को जन्मदिनमा चियापान ।
९ प्रस्तावित कार्यालयको कक्षमा रँगरोगन ।
नयाँ बर्षको आगमन सँगै हामीले सिनेमा हलमा गइ साथैसँगै बसि सिनेमा हेर्ने योजना बनाएका थियौ । नो भीड को फर्मुला लाइ अवलम्वन गर्न बिवश भयौ । उचित समयमा यो थाँती रहेको योजनाले मुर्त रुप लिने नै छ । त्यसैगरि केन्द्रमा आवद्ध पुरुषका लागि ज्वारीकोट र महिलाको लागि पछ्यौरी व्यवस्थापन गर्ने सहमती सल्लाह समेत प्रभावित भएको अवस्था छ । सहज परिस्थितिको सृजना हुनासाथ तोकिएको पहिरनमा ठाँटीएर सहभागि हुनुहुने नै छ ।
हरेक जमघटमा एकखाले उर्जा मिल्छ । अव केहि हुन्छ । केहि गर्नु पर्छ । अवश्य पनि साथ र सहयोग पाइन्छ । सबैको सुझाव सल्लाह आशिर्वादले केन्द्रको ओत र ओज बिस्तार हुन्छ । भन्ने लागिरहेछ । सुवर्ण सरसँग स्थानीय देशी बिदेशी धेरै शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरुले सहयोगको हात बढाइ रहनु भएको छ भने मेरा अनन्य मित्रहरुले पनि हाम्रो चर्तिकलाको निकै तारिफ गर्नु भएको र हामीलाइ नि सम्झनुस् है भन्नु भएको छ । त्यही भएर हामी हौसिएका छौ ।
जेष्ठ नागरिकको हैसियत तथा अवस्था जोसुकैले पाउन सक्ने अवस्था होइन । कुरा सुन्नु बुढाको त्यसै भनिएका होइनन् । वहाँहरुको ज्ञान अनुभवसँग साक्षात् हुन सके पुस्तान्तरणको समस्या हुने थिएन । बैज्ञानिक उपलव्धताका कारण विश्व साघुरिएको अवस्थामा जेष्ठ नागरिकहरुसँग समय विताउन को फुर्सदिला होलान् र । कृत्रीम सँसारमा रमाउन खोज्नेहरुले जीउँदा देवताहरुसँगको सानिध्यतालाइ बेवास्ता गरि आएको अवस्थालाइ क्रमभङ्ग गर्नु जरुरी छ । अहिले नगरे कहिले । हामीले नगरे कसले । अतः मनन गरौ । सोचौ । सम्झौ ।
कस्तो हुनुपर्छ त केन्द्र ?
केन्द्रले के के गर्ने ?
तपाइको राय र भुमिका के ?
यि र यस्तै विविध विषय र जिज्ञासा उपर यहाँहरुको राय सुझावले योजना र अभियानलाइ सार्थक सहज र सफल बनाउने बिश्वास छ ।
गरिने तथा गर्न सकिने केहि कार्यक्रमहरु यस्ता छन् । उमेर ढल्केको महशुस नहुने गराइ स्वास्थ्य तन्दरुस्त बनाउन स्वास्थ्य शिविर तथा प्रवचनहरु आयोजना गर्ने । सरसफाइ सहित सुहाँउदो पहिरनमा सुसज्जीत गराइ विभिन्न स्थलहरुको अवलोकन भ्रमणमा लिएर जाने । घरपरिवार का सदस्यहरु समेत साथै राखि विज्ञहरु सँग घुलमिल गराउने । मनोरञ्जन खेलकुद र व्यायाम तथा योगका ज्ञान र सरल अभ्यासहरु गराउने । समग्रमा उमेर घटाउने र आयु बढाउने फर्मुला अपनाउने । जेष्ठ नागरिक घरका बोझ होइनन् उत्प्रेरणाका श्रोत हुन् । कतै आश्रममा थन्काइनु पर्ने सामान होइनन् अपरिहार्य गहना हुन् । टोलटोलमा मिलन केन्द्रहरु सञ्चालन हुनुपर्छ । मिलन केन्द्रमा घरपरिवारका अन्य सदस्यहरु समेत आउने बस्ने र सहयोग गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ । मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालमा रुमलिनु भन्दा वहाँहरु सँग भलाकुसारी गरेर घुलमिल भएर साथ दिनु पर्छ । एकापसमा समन्वय गरि जेष्ठ नागरिकको स्याहार सँरक्षण गर्ने घरपरिवार लाइ प्रोत्साहित गरिनु पर्छ । स्थानीय तहले पुरस्कृत गरोस् जेष्ठ नागरिक मैत्री घरलाइ । स्थानिय कार्यक्रमहरुमा वहाँहरुलाइ नै प्रमुख अतिथि तथा बिशेष अतिथिको सम्मान दिन सकिन्छ ठुलाबडा भनाउँदाहरुको खोजी जरुरी छैन । राज्यले दिएको सेवा सुविधा समेतबाट बञ्चित गराउने वा घटिया राजनिति गर्ने प्रबृत्तीलाइ दुरुत्साहन गर्नु पर्छ ।